Anime Legends 2.5 - Online
နေအိမ် » တိုက်ပွဲတွေ » Anime Legends 2.5
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Anime Legends 2.5
anime Legends2စိန့် Seiya မှ Naruto ကိုမှ One Piece မှ Goku မှ DBZ, Mihawk ကနေအထိ 18 ဖွင့ ်. ဇာတ်ကောင်တစ်ပြင်လုံးကိုအသစ်တစ်စုံ, Orochimaru ရှိပါတယ်, နှင့် Saga ရွှေစိန့်။
ထိန်းချုပ်ရေး: Player 1： A/D move left/right
J: Attack / select
U/I: skills Player 2： Left/Right Arrow: Move left/right
Down Arrow: Defense
1: attack / select
4/5: Skills Use A/D to move between maps and characters. Esc: Go back to Main Menu Anime Legends 2.5 Anime Legends 2.5 takes you on an epic battle between legendary fighters. In version 2.5 two new Saint Seiya Joins the battle: Pegasus and Purple Dragon. Also fixed some bugs and add other UI and music improvements. In version 2.4 two new characters are added: Naruto normal form and Naruto Nine Tail form. In version 2.3 two new characters are added: Cygnus Hyōga the Bronze Saint of Cygnus and Gemini Saga the Gold Saint in the constellation Gemini in Saint Seiya (Sanctuary Arc) Anime Legends2hasawhole new set of 18 playable characters ranging from Goku from DBZ, Mihawk from One Piece, Orochimaru from Naruto, and Saga Gold Saint from Saint Seiya. Check out the the first version of Anime Legends that include 13 new sets of characters. As Always, Good Luck and Have Fun. Anime Legends 2.5
(1 မဲပျမ်းမျှ 3.005ထဲက)
ကစား: 28,212 tag ကို: Anime Legends, anime ဂိမ်း, နဂါးဘောလုံး, နဂါး Ball ကိုဂိမ်းများ, dragonball fighting, Naruto ဂိမ်းတွေ, Saint Seiya, Cygnus, goku ဂိမ်း
Naruto mini ကိုစစ်တိုက် 2
Naruto ကို, Sasuke ကို, Lee နဲ့ကွီးရယ်စရာတိုက်ပွဲများဂိမ်းထဲမှာအများကြီးပို၏ mini ကိုဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ Play!
2.8 ဂိမ်းအွန်လိုင်း Fighting အခမဲ့နဂါး Ball ကိုပြင်းထန်တဲ့ Play ။ နဂါး Ball ကိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲများ 2.8 သိကောင်းစရာများ, Tricks နဲ့ Dragon Ball ကိုသင့်ရဲ့ Facebook ကိုမှ 2.8 hack ကပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲများမျှဝေပါ။
နဂါးဘောလုံးကို z ဟယ်လိုပြင်းစွာသောအ
ဟယ်လိုညတွင် Goku ဖရုံသီးနဲ့ Dragon Ball ကိုရှာတွေ့သူကအားလုံးရန်သူပစ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွနဂါးဘောလုံးစုဆောင်းဖို့ဆဲလ်ကိုတိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုဒီမစ်ရှင်ပြီးစီးခြင်းကိုကူညီပါ။
Naruto v2.4 vs အရောင်ချွတ်အရောင်တင်
Naruto ကိုနှင့် Bleach လောကီသားတို့သည်အတို့တွင်စစ်ရသေးကျော်မပါ! ဆက်ပြောသည်လေး update ကိုအသစ်တိုက်လေယာဉ် Madarame Ikkaku, Jiraiya နဲ့ Deidara ဟာအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် Kusajishi Yachiru နှင့် Hyuuga Hinata ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့အခြမ်းကို Select လုပ်ပါနဲ့လူသိများတဲ့ cro အတွက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါပြင်ဆင်ရ
နဂါးဘောလုံးကို z အသင်းလေ့ကျင့်ရေး
နဂါး Ball ကို Z ကိုရေးအဖွဲ့သင်တန်းအွန်လိုင်း Play ။ Share ကိုအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းဘို့နဂါး Ball ကို Z ကိုရေးအဖွဲ့သင်တန်းဂိမ်း hack ။
သငျသညျအန်နီမေးရှင်း၏ပန်ကာများမှာနှင့်ဂိမ်းများကိုတိုက်လျှင်သင့် One Piece, Yu-gi-ho သို့မဟုတ်နဂါးဘောလုံးကိုဇာတ်ကောင် vs တိုက်ပွဲအများအပြားနာရီပေါင်းများစွာပါလိမ့်မယ်။2ကစားသမား option ကို။ Player ကို 1: W, တစ်ဦး, S, D ကို, နှင့် J, K သည်, L ကိုအတူ hit ။ Player ကို 2: Arrows နှင့် 1,2,3 နှင့်အတူ hit ။
ကမ္ဘာ၏လူကြိုက်အများဆုံးကာတွန်းဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ်။ နဂါး Ball ကို Z ကို, One Piece, Naruto ကို, Bleach .... သူတို့ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ကမ္ဘာကနေလာပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာအတူတူ, သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကြိုးစား, အပေါ်လာ!
Goku သူ့ကိုမြေကြီးသို့လာရာလမ်းကိုကူညီရှာဖွေ, NameK ဂြိုဟ်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
90 ရဲ့အစောပိုင်း consoles စဂိမ်းအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဒဏ္ဍာရီ pixel တိုက်ပွဲများဂိမ်း၏နောက်ထပ်ဝတ္ထုဗားရှင်း။ သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ကလေးဘဝအမှတ်တရများကိုစွဲလန်းနှစ်သက်!
နဂါးဘောလုံးကို z ကျွန်းသစ်
Kame Sennin ကျွန်းနဂါး Ball ကို Z ကို၏စစ်သူရဲတို့သည်စစ်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာဖြစ်၏။ ဒါဟာသမုဒ္ဒရာအလယ်၌တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဤအသစ်အထူးလေ့ကျင့်ရေးဖွင့်ဖို့အချိန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့အဆှသားတော်ကို Goku နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ သင်တစ်ဦး lumberjack တူသစ်သားကိုခုတ်ဖြတ်ရန်ရှိသည်။ ဦးရန်
ပစ္စည်းများအားလုံးစုဆောင်းနှင့်ပိုပြီးရမှတ်များရရှိရန်သတိရ, Naruto ကိုဥမင်ကိုကျော်ယင်ကောင်ကသူ၏မစ်ရှင်ပြီးစီးခြင်းကိုကူညီပါ။
တိုက်ပွဲကဒီကာတွန်းကြယ်တို့သည်အသစ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အသစ်ဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ်! သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကကစားလာကြခြင်းနှင့်ပြင်းစွာသောအတိုက်ပွဲများပျော်မွေ့! 1p: တိုက်ခိုက်ရန်, UIOJKL ရွှေ့ဖို့ WASD ။ 2p: တိုကျခိုကျဖို့, 123456 ရွှေ့ဖို့ Arrow key တွေကို။
နဂါးဘောလုံးကို z ကာကွယ်ရေး
သင်သည်များစွာသောရန်သူများမှရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းအတွက်, သူတို့ကယ့်ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဟာ dragonball ခိုးယူဖို့ကဘာလဲဆိုတာ! သင့်ရဲ့မစ်ရှင်ဆိုမှုနှုန်းမှာကာကွယ်ပေးဖို့ပါ! အခုအချိန်မှာကကစားရန် Start နဲ့ဒီဂိမ်းကိုသင့်အကြိုက်ဆုံးတယောက်ဖြစ်လာနိုင်။ ကံကောင်းပါစေ!
နဂါးဘောလုံးကို z: အရူးဖုတ်ကောင် v3.0
တစ်ဦး Arcade တိုက်ပွဲများစတိုင်ဖုတ်ကောင် Fight ။ သူတို့အားဖုတ်ကောင်တယောက်အားဖြင့်တဦးတည်းကိုပယ်ကာကွယ်ဖို့ဇာတ်ကောင်၏ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်များနှင့်အင်္ဂါရပ်ကိုကောငျးစှာအသုံးလုပ်ပါ။
Goku နဲ့ပြေးပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းပတ်လည် romp များအတွက်နဂါး Ball ကိုဂိုဏ်း Join ။
anime ဒဏ္ဍာရီစစ်တိုက် 1.5
Naruto, အရောင်ချွတ်အရောင်တင်, တဖဲ့ကိုရခြင်း, နတ်သမီးပုံပြင်နှင့်လူကြိုက်များ anime သို့မဟုတ်ဂန္ Arcade တိုက်ပွဲများဂိမ်းကနေအများအပြားပိုပြီးသူရဲကောင်းများအကြားစစ်တိုက်။ Ragna အသွေးနှင့် Jin က kisaragi: အ BlazBlue ဂိမ်းဒီဗားရှင်းကဆက်ပြောသည်သည်မှ2အသစ်ဇာတ်ကောင်။ သငျသညျမကစားကြလျှင်
ရွာကယ်ဖို့, Naruto ကိုဒီမစ်ရှင်ပြီးစီးခြင်းနှင့်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရရှိရန်မိမိအကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံး, ရှိသမျှအရိုးလူကိုသတ်ပစ်ရန်ရှိသည်။
Doraemon လမ်းတစ်လျှောက်မိမိအဘုတ်စကိတ်စီးခြင်းရှောင်ပါအတားအဆီးကိုသုံးပါနှင့် Jyian မှလွတ်မြောက်ရန်ကူညီပါ။
နဂါးဘောလုံးကို z: snakeway
Goku စသည်တို့ကို Vegeta, Bou တူရန်သူစည်းဝိုင်းရံနေတဲ့ဖျက်ဆီးခံရမြွေလမ်းအပေါ်ခက်ခဲပြေးသည်နဂါး Ballz မြွေလမ်းဂိမ်းအနိုင်ရမည်ဟုမှနောက်ဆုံးခရီးလမ်းဆုံးထိ
နဂါးဘောလုံးကို z 2.4
နဂါး Ball ကိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲများဗားရှင်း 2.4 သင်တို့အဘို့အစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေထည့်ပါ။ အခုတော့တစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို select လုပ်ပါနဲ့နောက်ဆုံးအောင်ပွဲအနိုင်ရဖို့အားလုံးကိုပြိုင်ဘက်ရိုက်နှက်!
ဟော်ကီကစားရန်နဂါး Ball ကို Z ကိုအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဂရိတ် anime လှုပ်ရှားမှုတိုက်ပွဲများဂိမ်း။ ရန်သူ CPU ကိုသို့မဟုတ်2Player ကို Mode ကိုအတူက Play ။
ဥမင်ထဲမှာ Naruto စစ်တိုက်
Naruto ရဲ့မစ်ရှင်ဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဂူထဲမှာဘဏ္ဍာကိုရှာတွေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုလာကြတယ်ရန်, ရွှေ့ဖို့ Space Bar ကိုမြှား key ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဘဏ္ဍာကိုရှာတွေ့မှအထူးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအပေါငျးတို့သညျရနျသူတို့ကိုကိုဖကျြဆီးကိုကူညီပေးပါ။
Naruto 1.9 vs အရောင်ချွတ်အရောင်တင်
ဒီ update ကို Susanoo နှင့်အတူ Sasuke ကိုနှင့် Naruto ကိုသစ်ကိုအသွင်ပြောင်းပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်ဘာဂ်လူသိများ။
ဒီရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, Doraemon နှင့် Nobita မြို့လှပတဲ့ချယ်ရီပွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်, Doraemon နှင့် Nobita သင်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းနေဖြင့်ဤလှပသောမြို့ရှာဖွေတွေ့ရှိပါစေနှင့်အသီးအသီးတံခါးကိုသော့ဖွင့်။
2.3 Fighting နဂါး Ball ကိုပြင်းထန်တဲ့၏ဘယျသူမှမအောငျ version ကိုသငျသညျကိုတိုက်ဖို့ပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုချွတ်ပြသနိုင်ဖို့ယခုသင်၏အချိန်ပါ! 1p: တိုက်ခိုက်ရန်, UIOJKL ရွှေ့ဖို့ WASD ။ 2p: တိုကျခိုကျဖို့, 123456 ရွှေ့ဖို့ Arrow key တွေကို။
နဂါးဘောလုံးကို z ဂြိုဟ် namek
Goku ထူးဆန်းတဲ့ဂြိုလ်ထဲမှာပျောက်ဆုံး, သူ့ကိုတိုက်ခိုက်မိကျောင်းရှိပါတယ်။ သူ့ကိုသူတို့ကိုဖျက်ဆီးနဲ့ဒီဂိမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်သွားအထူးကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးကိုကူညီပေးပါ။
goku တိုက်ပွဲများ vs Naruto
အချိန်အာကာသပုံပျက်, Naruto နဂါးရှာတွေ့ဖို့ dragonball World သို့ရောက်ကြ၏။ Naruto ကျောမူရင်းကမ္ဘာကိုသွားကြဖို့အားလုံး Boss ကိုဆင်းရိုက်ကိုကူညီပေးပါ။
ပုံမှန်ပြပွဲဂိမ်း - လက်သီးလာကြတယ် 2
Spiderman 3d တိုက်ပွဲများ
ben 10 omniverse ဂိမ်း - omniverse စုဆောင်းခြင်းအွန်လိုင်း
hong kong နင်ဂျာ
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စည်းချက်-em-up, Arcade ဂိမ်း။ ဟောင်ကောင်၏လမ်းများအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်း Fight ။
ရန်ပွဲနောက်ကျောနှင့် spookier ယခင်ကထက်ပါ! ထို Spooky မျှော်စင်ကိုတက်သင့်ရဲ့လမ်းတောင်တက်သင်၏ရန်သူတို့ကိုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်တော် Mode ကိုသော့ဖွင့်။ ကြောက်စရာရန်ပွဲ, Nickelodeon ရဲ့ spookiest အခမဲ့အွန်လိုင်းတိုက်ပွဲများဂိမ်းထဲမှာသင် SpongeB တူ, ဇာတ်ကောင်တစ်ဦး variet မှရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်
ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်ပီဇာရှာပုံတော်
ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles အားလုံးရန်သူများကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါအတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်။ ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles ပီဇာ Quest Play နဲ့ပျော်စရာရယူပါ။
အားကြီးသော magiswords ရှုထောင်လွှမ်းမိုးမှုကို
သူတို့တန်ခိုးကြီးသော Magiswords စုဆောင်းရန်သူတို့၏ရှာပုံတော်အတွက်အန္တရာယ်နှင့်လိုက်တယ်သတ္တဝါများရင်ဆိုင်ရစဉ် Lyvsheria လောကီသားတို့သည်တစ်ခရီးစဉ်အပေါ် Prohyas နှင့် Vambre Join!
Ninja ကိုလိပ် vs ပါဝါ Rangers အန္တိမသူရဲကောင်းတိုက်ပွဲဖြစ် 2
လူတိုင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးသူရဲကောင်းများတစ် All-ထွက်ရန်ပွဲအတွက် action ကိုပြန်များမှာ! ul: ပတ်ပတ်လည် Nickelodeon ၏အွန်လိုင်းတိုက်ပွဲများဂိမ်းမှနောက်ဆက်တွဲအတွက်အခက်ခဲဆုံးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာရှင်တွေ, ပါဝါ Rangers vs ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်
အာဏာကို Rangers အဆုံးစွန်သူရဲကောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်2vs ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်
Nickelodeon နောက်ဆုံးပေါ်အွန်လိုင်းတိုက်ပွဲများဂိမ်းထဲမှာပတ်လည်အခက်ခဲဆုံးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာရှင်တွေဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်။ ပါဝါ Rangers Ultimate သူရဲကောင်းတိုက်ပွဲများ vs ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles ကစားသမားတွေအသင်းအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မည်သည့်အတွက်ပျော်စရာအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်
anime ဒဏ္ဍာရီ 2.5
နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ် omniverse ben 10
အခမဲ့အဘို့, ဘင် 10 Omniverse ဂိမ်း, နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲများ Play ။ စစ်ဘုရင်ရောဂါ, ကမ္ဘာဂြိုဟ် Khoros ၏အကဲအမှူး, တစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အားလုံးကိုနဂါးငွေ့တန်းကျော်ကနေအကောင်းဆုံးသူရဲစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲများပိုမိုဘင် 10 ဂိမ်းများနှင့်အခြားအခမဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်း Play ။ <
ben 10: omniverse သူပုန်တိုက်ပွဲ
အွန်လိုင်းသူပုန်တိုက်လေယာဉ် Play - သင့်လေယာဉ်တင်ခြင်း, အစွမ်းထက်ဒုံးကျည်များနှင့်အတူအပေါငျးတို့သညျရနျသူသင်္ဘောများပစ်ချ! ရည်ရွယ်အပေါင်းတို့နှင့်ရန်သူများကိုဖျက်ဆီးဖို့လက်ျာအချိန်တွင်ရိုက်ကူး။ သငျသညျအရေးယူဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား ခံစားကြည့်ပါ !.
ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja ပြိုင်ပွဲတိုက်လေယာဉ် turtles
ပြိုင်ပွဲတိုက်လေယာဉ် - TMNT ။ ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles ပြိုင်ပွဲတိုက်လေယာဉ်။ ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်ပြိုင်ပွဲတိုက်လေယာဉ်အ TMNT ဝဠာကိုမှသူရဲကောင်းများနှင့်လူကြမ်းအဖြစ် featuring တစ်ဦး retro Arcade တိုက်ပွဲများဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 1 ကစားသမား mode ကိုသို့မဟုတ် TOU တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်
ပုံမှန်ပြသအနေဖြင့်အများဆုံးဧရာဇာတ်ကောင်တို့တွင်အကုမ္ပဏီကြီးများ၏ဤစစ်တိုက်ခံစားပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဇာတ်ကောင်ကိုအနိုင်ယူဖို့ကန်ဘော, ကိုထိုးကြိတ်နှင့်အထူးရွေ့လျားတစ်ဦးလက်နက်ရှိပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းရေးအဖွဲ့ရှိသည်: ပါဝါ Rangers, Superman, Batman အားလုံးရန်သူများကိုစစ်တိုက်ခြင်း။ သူတို့ကိုလက်ဝှေ့သတ်အသူရဲကောင်းများ၏ထိန်းချုပ်ရေး, ဒီဂိမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့် Pass ။ သင်ပြိုင်ဘက်ထိမှန်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးတစ်လာကြတယ်အာဏာကိုရလိမ့်မည်။
အာဏာကို Rangers နဂါးတိုက်ပွဲများစိတ်ပြင်းထန်ခြင်း
အခမဲ့ပါဝါ Rangers Play: Monster တိုက်ပွဲများပျော်ပါးဂိမ်းအွန်လိုင်း။ သင်၏အဆွေခင်ပွန်းဘို့ Monster တိုက်ပွဲများပျော်ပါးဂိမ်းအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်နဲ့ပျော်စရာရ: ဤပါဝါ Rangers မျှဝေပါ။ ပါဝါ Rangers နောက်ကျောအစဉ်အဆက်ထက် သာ. တန်ခိုးကြီးကြ! ရနျသူတို့နှင့် colle အများကြီးဆန့်ကျင် Play
နဂါး Ball ကို 1.9 Fighting
ဒီ version ကိုရှေ့တော်၌, ထက်ပိုပြီးပြင်းစွာသောအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်မွေ့သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆော့ကစားမညျ! ပျော်ရွှင်ပါစေ!
စက်ရုပ် vs ကို Power Ranger
ပါဝါရိန်းဂျားသို့မဟုတ်စက်ရုပ်သောဘက်တဦးကိုရွေးချယ်ပါ။ ရှေ့ဆက်သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တယောက်ခြေလှမ်းနေပါ။ ပိုများသောကြိမ်သင်ပတ်ပတ်လည်အနိုင်ရဖို့ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းရှိလိမ့်မည်သင်၏အပြိုင်ဘက်ရိုက်တယ်။
နဂါး Ball ကို Z ကိုအာဏာခွဲဝေ
သားတော်သည် Goku အဆုံးအထိကမ္ဘာ့ဖလားကိုယ်ခံပညာပြိုင်ပွဲအတွက်စစ်တိုက်ရပါမည်။
နဂါး Ball ကို 1.8 Fighting
အသစ်ဖြန့်ချိနဂါး Ball ကို 1.8 Fighting အားလုံးယခင်နဂါးဘောလုံးကိုတိုက်ပွဲများဂိမ်း၏အနှစ်သာရကိုပေါင်းစပ်။ ပိုများသောအသစ်ဇာတ်ကောင်ပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ပျံကျွမ်းကျင်မှု။ လေထုထဲတွင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ပေါ် လာ. , ထိုချန်ပီယံအနိုင်ရ
နဂါး Ball ကို 2.0 Fighting
2.0 Fighting နဂါး Ball ကို - 2.0 တိုက်ခိုက်နေနဂါးဘောလုံးကိုအလွန်ခရစ္စမတ်ပွဲကျင်းပရန်သင့်အားပေးအပ်နေပါသည်! နယူးအဆင့်ဆင့်တီထွင်နေကြပါတယ်။ နယူးဇာတ်ကောင် Bick ကြီး, မျောက်ကို Magic နှင့် Dhabeji ၏ zoarium တူဆက်ပြောသည်ကြသည်။ နဂါး Ball ကိုတိုက်ပွဲတွေ reache ဖြစ်ပါတယ်
3 Fighting ရုပ်ပြ Stars: နဂါး Ball ကို Z ကို
3 Fighting ရုပ်ပြ Stars: ဤတိုးမြှင့်ဗားရှင်း3ခုနှစ်တွင်နဂါး Ball ကို Z ကိုပိုမိုပုံသဏ္ဍာန်-ပြောင်းကုန်ပြီအခန်းကဏ္ဍဆက်ပြောသည်ကြသည်။ သူတို့သညျအခနျးကဏ်ဍအားလုံးပွင့်လင်းပေမယ့်သူတို့ကိုသင်အဆငျ့ဖွငျ့အဆငျ့သော့ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ချက်ချင်းပဲဒီပူဂိမ်းကစားရန်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုဖိတ်ခေါ်ပါ! ဂိမ်းညွှန်ကြားချက်များ: Player ကို
နဂါး Ball ကိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲများ
Goku ယခုစွန့်စားမှုတစ်ခုအသစ်ခရီးကိုစတင်နေပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ကိုသူ့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေအများအပြားပြင်းစွာသောအတိုက်ပွဲများရှိပါတယ်။ သငျသညျသူရှင်သန်နိုင်ထင်ပါသလား?
ဒန်နီမြို့ပြ Jungle မြည်
အခွားသောကာတွန်းဇာတ်ကောင် Fight နှင့်ဆုရှင်ထွက်လာကြ၏။ အထူးရွေ့လျား Unlock ။